09/23/13 ~ Myanmar News Updates
9:36:00 PM Myanmar News Updates No comments
တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း၏ ပန်းတိုင်ပင် ဖြစ်ပေသည်။အဖြေမှာ . You understand instantly. ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့၏ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းကို ပြောင်းရန် လိုအပ်ပေသည်။ပထမဆုံး လုပ်ရမည့် အချက်မှာ English words တွေကို လေ့လာခြင်း အလုပ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ။ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ အချက်ပါပဲ။ words တွေကို မမှတ်သားသင့်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို စတင်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်တို့ ပညာရေးစနစ်ဟာ factory English learning system ပါပဲ။text book ထဲမှ vocabulary များအားကျက်ခြင်း meaning ကျက်ခြင်းတို့ကို ကျွန်တော် တို့ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီး။သို့သော်…ကျွန်တော်တို့သည် ဒီလောက်များပြားလှသော words တွေကို တကယ့်အပြင် လက်တွေ့ဘ၀တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ထိုများပြားလှသော စကားလုံးမျာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲတွင် လွယ်ကူစွာ ပျက်ပြယ်သွားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ဘာကြောင့် လွယ်ကူစွာ ပျက်ပြယ်သွားရသလဲ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေသည် text book English ထဲက individual words တွေရဲ့ meaning တွေကိုပဲ လေ့လာခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ native speaker တွေဟာ words တွေကို မှတ်မိခြင်းအားဖြင့် မလေ့လာကြပါ။သူတို့ဟာ phrases တွေကို လေ့လာကြပါတယ်။ what isaphrase? Phrases ဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း အလိုလို တွဲထားသော words အစုတွေပင် ဖြစ်ပါတယ်။phrases တွေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့်တခြားအကျိုးသက်ေ၇ာက်မှုကတော့ vocabulary နဲ့ grammar ကိုပါ လွယ်ကူစွာ သူ့အလိုလို လေ့လာသွားတာပါပဲ။ phrases လေ့လာတဲ့ သူသည် grammar လေ့လာတဲ့သူထက် အင်္ဂလိပ်စကားကို ပိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဒါမှမဟုတ် Newspaper တွင် ကျွန်တော်တို့ မသိသော word တစ်ခု တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း သူ့ဘေးတွင် ကပ်လျှက်ရှိသော စာလုံးများ ဒါမှမဟုတ်..sentence တစ်ခုလုံးကို မိမိ၏ note book ထဲတွင် မှတ်သားထားသင့်ပေသည်။ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရန် phrases များ စုဆောင်းရန်အတွက် note book သီးသန့် တစ်အုပ် ထားရှိသင့်ပေသည်။ကျွန်တော်တို့ အရင်လေ့လာတဲ့စနစ်က word တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ meaning ကိုပဲ လေ့လာခဲ့ကြတဲ့ စနစ်ပါ။ အခုလေ့လာတဲ့စနစ်က phrases ( groups of words ) တွေရဲ့ meaning ဒါမှမဟုတ် sentence တစ်ခုလုံးရဲ့ meaning ကို လေ့လာတဲ့စနစ်ပါပဲ။ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို second language အနေနဲ့ သင်ယူနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ natural learning system ပါပဲ။အဓိက အချက်ကတော့ မှတ်သားထားသော phrases တွေကို အကြိမ်ကြိမ် review လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။
နောက်ထပ်ယုံကြည်မှုတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ သင့်ရဲ့ လေ့လာမှုကို လုံးဝပြောင်းလဲစေမှာပါ။ အဲ့တာကိုတော့ CANI လို့ခေါ်ပါတယ်။ CANI = CONSTANT AND NEVER-ENDING IMPROVEMENT ( အမြဲတမ်းနဲ့ အဆုံးမရှိသော တိုးတက်မှု ). CANI means that you will speak English very easily by focusing on small improvements every day. Thatʼs right-- SMALL improvements. With CANI, Our goal is to makeavery tiny improvement each day.
နဝဒေးတံတားအောက် လူသတ်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အရေးယူပေးရန် ဒေသခံများ လက်မှတ်ရေးထိုး
တပ်မတော်သားသုံးဦး ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲတိုင်ကြားထားသော ပြည်မြို့ နဝဒေး တံတားအောက် လူသတ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးရန် ဒေသခံများက စက်တင်ဘာလ ဒုတိယပတ်မှ စတင်၍ စုပေါင်း လက်မှတ် ရေးထိုးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများထံမှ သိရှိရသည်။
ငါးလကြာသည်အထိ အမှုမှန် စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်၍ လူသတ်မှု ဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများနှင့် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာများကို ဖြန့်ဝေကာ လက်မှတ်များကို စုဆောင်းနေပြီး လက်ရှိလက်မှတ် ရေးထိုးသူများတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကျော်သူ အပါအဝင် ပြည်မြို့နယ်ရှိ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံ တစ်သောင်းကျော်၏ လက်မှတ်များ စုဆောင်းရရှိထားပြီ ဖြစ်သည်ဟု ယင်းလက်မှတ်စု ဆောင်းမှုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသောသူ ပြည်မြိုခံ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ခုကတော့ လက်မှတ်က သောင်းဂဏန်း ရှိပြီ။ သိန်းဂဏန်းထိ ရလာနိုင်တယ်။ လက်မှတ်တွေကို စုပြီးတော့ ဒီလကုန်လောက်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး အပါအဝင် ဌာနဆိုင်ရာ တွေကိုပို့မယ်။ Facebook မှာ Page တစ်ခု ဖန်တီးပြီး Vote တောင်းမယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အာရုံစိုက်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်သွားမယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုတွင် ကျူးလွန်သူ တရားခံ၏ DNA နှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရန် သေဆုံးသူ အမျိုးသားထံမှ သင်္ဂြိုဟ်မည့်နေ့တွင် ရုပ်အလောင်းမှ DNA ယူခဲ့ပြီး တရားခံများ ဖမ်းမိနိုင်ရန်အတွက် တပ်မတော်က စစ်ခုံရုံးနှင့် စီအိုင်ဒီတို့မှ တစ်ပြိုင်နက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့က လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီးချိန်တွင် သောင်ပြင်နှင့် ကပ်လျက် ကမ်းပါးယံ ကိုင်းတောထဲတွင် ပုန်းခိုနေသော သံသယဖြစ်ဖွယ် လူသုံးဦးကိုသာ တွေ့ရှိရပြီး ရပ်ကွက်နေလူထုက ဖမ်းဆီးရာနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း တစ်ဦးမှာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် လူများမှာ ခလရ ၇၅ တပ်မှ တပ်သားများ ဖြစ်ကြပြီး တပ်မတော်သားများ ဖြစ်သည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ညတွင်းချင်း တပ်သို့ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့သူ ဆင်စု ရပ်ကွက်သားများထံမှ သိရှိရသည်။
ကြက်တောင်ရိုက် အားကစားနည်းနဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
8:17:00 PM Myanmar News Updates No comments
၂၇ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင် အာရှဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်က တင်ဆက်နေကျဖြစ်တဲ့ ဆီးဂိမ်းလှုံ့ဆော်ရေး အားကစား ကဏ္ဍအနေနဲ့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကြက်တောင်ရိုက်အား ကစားနည်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဒီကြက်တောင်ရိုက်အားကစား နည်းအတွက် ကူညီ သရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ မင်းသမီးကို စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုရရှိပိုင် ဆိုင်ထား တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ် ဆောင် ခင်ဝင့်ဝါ ကို အားလုံး က သဘောကျ ကြပါတယ်။ ခင်ဝင့်ဝါကလည်း ဆီးဂိမ်း အားကစားလှုံ့ဆော် ရေးအတွက်ဖြစ် တာကြောင့် လိုလိုလားလားပဲ ကူညီပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းအား ကစားဝတ်စုံတွေအတွက်W&W Co;Ltd Royal Golden Owls (RGO) (SEA Games Souvenirs)မှကူညီပေးခဲ့ပြီးခင်ဝင့်ဝါအတွက် မိတ်ကပ်- ထက်(Pop Soul) ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါ တယ်။ ကြက်တောင် ရိုက်ကွင်းနေရာကိုတော့ အလုံမြို့နယ်ရှိ Indonesian International School မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ရိုက်ကွင်း အတွက် ဝိုင်းဝန်းအားပေးပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆီးဂိမ်းအား ကစားကဏ္ဍမှာတစ်ဖက် တစ်လမ်းကပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် တအား ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းငယ်စဉ်ကတည်းက အားကစား လုပ်ဖြစ်ကြောင်းကို ခင်ဝင့်ဝါက "ညီမ ငယ် ငယ်တုန်းကကြက်တောင်ရိုက်တယ်။ ဘောလုံးကန်တယ်။ပြေးတယ်။ အားကစားတွေအားလုံးကိုလည်း ကြိုက် ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကြက်တောင် ရိုက်ဖြစ် တယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ပြေးတယ်။ အားကစားလုပ်တာက ကျန်းမာရေး အတွက်များစွာအထောက် အကူပြုပါ တယ်။ ဥပမာ ဘောလုံးကန်တဲ့အား ကစားတစ်ခုကို ကစားလိုက်တဲ့အခါ ချွေးထွက် တယ်။ ချွေးထွက်တဲ့အခါခန္ဓာ ကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတွေအကုန် လုံးထွက်သွား တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက်အကူပြုတယ်" လို့ ပြောပါ တယ်။ ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ ကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ် တာကြောင့် ဂုဏ်ယူမိသလို မြန်မာ နိုင်ငံ က အားကစားသမား တွေလည်း အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ကာ ဆုတွေအများ ကြီးရပြီး မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် နိုင်တဲ့ အားကစားသမားတွေ ဖြစ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၇ကြိမ်မြောက် အရှေ့ တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင် ပွဲမှာ အားကစားနည်း၃၃ မျိုးထည့်သွင်း ကျင်းပသွား မှာဖြစ်ပြီး ကြက်တောင် ရိုက်အားကစားနည်း အတွက် ရွှေ၅ခု၊ ငွေ၅ခု၊ ကြေး၅ခုတို့ကို ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသားစားကြူး၍ ဝက်ဖြစ်သွားသော မကြင်သန်း
3:52:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတခုရဲ့အမည်မှာ အဲဒီလို တွေ့ရပါတယ်။
အသားစားကြူး၍ ဝက်ဖြစ်သွားသော မကြင်သန်း (ပညာပေးဇာတ်လမ်း)
ဇာတ်လမ်း နဲ့ ဒါရိုက်တာ မဟာ (M.Sc)
စသဖြင့် စသဖြင့် ရေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုကြော်ငြာတခုကို ရန်ကုန်မြို့လယ် ၃၅ လမ်း ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးရပ်ကွက်မှာ ဟိုတလောက တွေ့လို့ ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံက ထူးခြားနေတာကြောင့် ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org/ မှာ တင်ဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ကားနာမည်နဲ့ အယူအဆကတော့ အငြင်းပွားစရာ လို့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။
အသီးအရွက်စားတာများလွန်းရင်ရော သစ်ပင်ဖြစ်သွားမလား ဆိုပြီး ငေါ့တော့တော့ ပြောလာတာတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားထဲမှာ အဲဒီသရုပ်ဆောင်က ဘယ်လောက်တောင် အစားကြူးသလဲ၊ ဘယ်လိုစားသလဲ ဆိုတာကတော့ အဲဒီဗီဒီယိုကြည့်မှပဲ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပိုစတာကတော့ အင်မတန် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဗီဒီယိုဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်မယ့်ဇာတ်ကားလို့ ယူဆရပါတယ်။
12:30:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဒီလို အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေ စီးဝင်လာတာနှင့်အမျှ အနာဂတ်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ပြောင်းလဲလို့ လာပါပြီး..။ အတုမယူသင့်သည်များကို အတုယူလို့ လာပါပြီး....။ ထိန်းသိမ်းသင့်သည်များကို တဖြည်းဖြည်း မေ့ပျောက်လာခဲ့ကြပြီး...။
သိသိရဲ့ နှင့် မေ့တတ်ချင်ယောင်ဆောင်ကြတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်...။ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွေသာမက နေထိုင်မှု စနစ်တွေပါ မေ့ပျောက်ပြောင်းလွဲချင်ခဲ့ပြီး...။
ကားပြပွဲ တွေ မှာ အဖော်လွန် တဲ့ မော်ဒယ်(လ) တွေ ကို တရုတ် နှိပ် ကွပ်
တရုတ် ပြည်မှာ မော်တော် ကား ပြပွဲ တွေ ကျင်းပ တဲ့ အခါ မလုံ မခြံ ၀တ်ထား တဲ့ မော်ဒယ်(လ)
တွေ ကို ဖမ်းဆီး အရေး ယူတာ တို့မော်တော်ပြ ပွဲ ကျင်း ပတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကို လည်း အရေးယူတာ
တွေ လုပ် လာ ပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဒီနေ့ ထုတ် ဝေတဲ့ South China Morning Post သတင်း
စာ မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ လဆန်း က ချန်ဒူး မော်တော် ကား ပြ ပွဲ မှာ မစ်ယန်ယူ ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်(လ) အပါအ၀င်
အခြား မော်ဒယ် လေးဦး ဟာ ၀တ်လစ် စလစ် နီး ပါး ဖက်ရှင် နဲ့ပုရိသ တွေ အကြိုက် ဓာတ် ပုံ အရိုက်ခံ ခဲ့ တယ် လို့ဆို ပါတယ်။
ဒီကား ပြပွဲ မှာ ဂျပန် လုပ် မော်တော် ကား တွေ နဲ့တရုတ် ပြည် လုပ် မော်တော် ကား တွေ
အစိုးရ က နှိပ် ကွပ် ပေမယ့် လည်း မော်ဒယ်(လ) တွေ ရဲ့အစွမ်း ကြောင့် ကား တွေ အရောင်း စွံ သဗျို့ လို့ချန်ဒူး အော်တို ပြပွဲ ကို စီစဉ် သူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
Car News China အင်တာနက် စာမျက် နှာ မှာ တော့ ကား ပြ ပွဲ တွေ မှာ မော်ဒယ်(လ) တွေ ၀တ်လစ်စလစ် နီး ပါး အလှ ပြ ခိုင်း တာ မျိုး တွေ့ရင် အရေး ယူအပြစ် ပေးမယ် လို့ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့အိမ် နီး ချင်း နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ တရုတ် နိုင်ငံ မှာ ကား ပြ ပွဲ တွေ ၊ မော်ဒယ်(လ) ရှိုး တွေ မှာမမြင် အပ် တဲ့ နေ ရာ တွေ ကို ဖော်ပြ ပြီး လူကြိုက်များ အောင် လုပ်တာ ခွင့် မပြု တော့ ဘူး လို့ဆို ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ တော့ မော်တော် ကား ပြ ပွဲ တွေ မော်ဒယ် ရှိုး တွေ မှာ ၀တ်လစ်စလစ် နီး ပါး မဖြစ် သေးတာ
ကြောင့် သိသာ တဲ့ နှိပ် ကွပ် မှု တွေ မလုပ် သေးဘူး လို့မော်ဒယ်(လ) ပြပွဲ စီစဉ် သူ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။
လတ်တလော ကျင်း ပနေ တဲ့ မော်တော်ကား ပြပွဲ တွေ ၊ မော်ဒယ်(လ) ရှိုး တွေ မှာ စကတ် တို ယဉ်ကျေးမှုခောတ်စား နေပေမယ့် အဖော် အချွတ် လုပ် ပြီး ပြတာ မျိုးတော့ မတွေ့ ရ သေးဘူး လို့ရန်ကုန် မြို့က ဟိုတယ် မန်နေဂျာ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။
မိန်းမ အင်္ဂါပိုးဝင်ခြင်း(for girl)
9:46:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
မေး။ ။ သမီးက အသက် 25 နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင် ရှိပါတယ် (လက်ရှိ အဝေးရောက်နေ ပါတယ်)။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ် မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာပဲ သမီး ဓမ္မတာ ပြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ၄၊ ၅ ရက် ကြာပြီးမှ နောက်ထပ် သွေးထပ်ဆင်းပါတယ်။ ပုံမှန် ဓမ္မတာ လာသလိုပါပဲ။ ကိုက်ခဲတာလဲ မရှိပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေက ပုံမှန် ဓမ္မတာ ဆင်းတုန်းက အတိုင်းပါပဲ။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ သမီးက အခု နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်တာ မကြာသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဘက်က ဆေးခန်းပြဖို့ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိလို့ပါ။ သမီး မနှစ်လောက်က အမျိုးသားနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ တခါတလေ အနံ့ဆိုး ထွက်တတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖူးပါတယ်။ ဆရာမ ပြောတာတော့ ပိုးဝင် တယ်လို့ ပြော ပါတယ်။ အခုတော့ ကုလို့ပျောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမီး ဆေးစစ်ချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါ ပိုးဝင်လို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါ၊ နောက်ပြီး HIV ကူးဆက်ခံရရင် ဘယ်လို လက္ခဏမျိုး အရင်ပြပါသလဲ။ အဖုလေးတွေ ပေါက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘယ်လို အဖု တွေများ ပေါ်လာတတ်ပါသေးလဲ။ ဖျားသလို ကိုယ်ပူသလိုလဲ တခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ပေါက်တဲ့အဖု တွေကရော ဘယ်လိုနေရာမှာ ပေါက်တတ်ပါသလဲ။ မျက်နှာလိုနေရာမှာရော ဖြစ်တတ်ပါသလား။
ဒီလို မေးရင် ဘယ်လို ဖြေကြမလဲပဲနော်။ အသက်ရှူတာပဲ မွေးကတည်းက ရှူလာတာ၊ ရှူတတ်တာပေါ့..၊ ဘာ လာကြောင် နေတာလဲ ဆိုပြီး ပြန်ပြောကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တိတိ ကျကျ ထပ်ပြီး မေးပါဦးမယ်။
“သင် နည်းစနည်မှန်မှန် အသက်ရှူတတ်ပါရဲ့လား”
ဒီလို မေးရင်တော့ အနည်းငယ် စဉ်းစား သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးမှာ အသက်ရှူတာ နည်းစနစ်လို့သေးလို့လား။ ဒီလိုပဲ နှာခေါင်းက ရှူချင်ရှူမယ်၊ ပါးစပ်နဲ့ ရှူချင်ရှူမယ်၊ အဆန်းလုပ်ပြီး လျှောက်မေးနေတာလို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အသက်အပြည့်အ၀ ရှူပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ နွမ်းနယ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ချက်ချင်းပြေပျောက်စေတဲ့ နည်းစနစ် အမှန် တကယ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ ဒီလို နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို သိထားသင့်ပါတယ်။ Time Saving Idea စာစောင်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချိန်မကုန် မပင်ပန်းဘဲ ကျန်းမာရေး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်ဖို့ တင်ပြထားချက်တွေကို အခြေခံပြီး ရေးသားတင်ပြပေးပါ့မယ်။
ဒီ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အစာမကြေ ဖြစ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်မှာ ပင်ပန်းသမျှတွေကို ယူပစ်လိုက်သလို ချက်ချင်းသိသာ ပြေပျောက်စေနိုင်တယ် ဆိုတာ အသေအချာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန်မကုန် ငွေမကုန်တဲ့ အပြင် အင်မတန်ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ အတွက် မည်သူမဆို ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အဟာရနဲ့ အောက်စီဂျင်တို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ မွေးဖွားရင်း၊ ဆဲလ်အဟောင်းတွေ သေဆုံးရင်းနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အစားအစာ အဟာရကို ဦးစားပေး စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ အဟာရ ဖြစ်စေမယ့် အစားအစာကို ရွေးချယ် စားသုံးကြတာ အများစုပါ။ သို့ပေမယ့် အဟာရချည်း ပြည့်စုံနေလို့ မဖြစ်ပါ။ အောက်စီဂျင်လည်း အချိုးညီညီ ပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့မှသာ အဟာရနဲ့ အောက်စီဂျင် အပြန်အလှန် အကျုိးပြု ထောက်ပံ့ပေးပြီး ညီညွတ်မျှတတဲ့ ကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်လာမှာပါ။
လူတွေဟာ သွားလာ လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေကြပေမယ့် အသက်ရှူတဲ့အခါမှာတော့ အပြည့်အ၀ မရှူကြပါဘူး။ အသက် အပြည့်အ၀ မရှူတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင်လည်း အပြည့်အ၀ မရပေဘူးပေါ့။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်လျက်သော်လည်းကောင်း၊ ရပ်လျက်သော်လည်းကောင်း အလုပ် လုပ်နေမယ်၊ အသက်လည်း အပြည့်အ၀ မရှူနိုင် ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ သွေးထဲဝင်ရောက်လာပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းသွားစေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အောက်စီဂျင် နည်းပါးသွားတာကြောင့် နွမ်းလျသွားတာပါ။ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ဇက်ကြောထိုးမယ်၊ မအီမသာ ဖြစ်မယ် စသဖြင့် ခံစားလာရတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး ဆရာရယ် ဆိုပြီး ဆရာဝန်ထံ သွားပြရတော့တာပဲ။ ဒီလို ဖြစ်ရတာဟာ အောက်စီဂျင် မပြည့်ဝလို့၊ အောက်စီဂျင် လိုအပ်လို့ပါ။ လူဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ အသက်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှူကြပါတယ်။ နိုးထနေချိန် တွေမှ အပြည့်အ၀ အသက်ရှူတာ မရှိသလောက်ပါ။
အထူးသဖြင့် အားကစား မလုပ်ဘဲ တခြားအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေချိန်မှ လူ့ အဆုတ်ရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အသက်ကို ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ အားကစား လုပ်နေသူ တွေကတော့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှူထုတ် ရှူသွင်းပြုလုပ်ပါတယ်။ အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက နေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အထိ အသက်ရှူပါတယ်။ လူသားနဲ့ သက်ရှိတွေအတွက် ကံကောင်းတာက သစ်ပင်တွေက နေ့ခင်းမှာ ကာဗွန်ကို စားသုံးပြီး ညခင်းပိုင်းမှာ အောက်စီဂျင်တွေ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးနေတာပါ။
အခု ဆက်ပြီး အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြပါ့မယ်။ အဆုတ်ထဲကို လေအပြည့်အ၀ ရောက်ရှိအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ အချိန် ၅ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက် ရရင်ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ လမ်းသွားရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ရင်း၊ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှန်လှဲအိပ်ရင်း ဘယ်လို အနေအထားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ လက်တင်ပါတဲ့ ကုလားထိုင် (Arm Chair) ပေါ်မှာ (သို့မဟုတ်) ပြင်ညီကြမ်းပြင် (ဆိုဖာပေါ်မှာ မဟုတ်) ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခြင်းပါ။ ပထမဆုံး လက်တင်ပါတဲ့ ကုလားထိုင် ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ဖို့ အတွက် အရင်ပြောပါမယ်။
လက်တင်ပါ ကုလားထိုင်ပေါ် သက်သောင့်သက် အရှိဆုံး အနေအထား အတိုင်း ထိုင်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို တန်းပေါ် တင်၊ ခြေထောက် တွေကို ရှေ့ကို ဆန့်ထား၊ ခေါင်းကို နောက်မှီ တန်းပေါ် အနည်းငယ် မော့ပြီးတင်၊ နောက်စေ့နဲ့ ချိတ်ထား၊ မျက်နှာကို ရှေ့သို့ တည့်တည့်ထား၊ မျက်လွှာကို ပိတ်၊ ခါးကို ဆန့်၊ ပုံမှန် အသက်ရှူ၊ ခေါင်းကို ဟိုဘက် နည်းနည်း ဒီဘက် နည်းနည်း လှုပ်ပေးပြီး အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်း စပါ့မယ်။ ထူးထူး ဆန်းဆန်းကြီး မဟုတ်ပါ။ လေကို နှာခေါင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည့်ချင်း ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲပြည့်အောင် ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲ နောက်ထပ် လေတစက်မှ ထပ်ရှူသွင်းလို့ မရတော့တဲ့ အထိ ရှူသွင်းပါ။ အဆုတ်ထဲမှာ လုံးဝပြည့်နေတဲ့ပြီ ဆိုရင် ချက်ချင်း ပြန်မထုတ်သေးဘဲ ခေတ္တ အောင့်ထားပါ။ အောင့်နိုင်သလောက် အောင့်ထားပါ။ လုံးဝ မအောင့်နိုင်တဲ့ အထိ အောင့်ထားပါ။ မအောင့်နိုင် တော့တဲ့ အခါကျမှ ပါးစပ်က တဖြည်းဖြည်းချင်း လေကို ပြန်ထုတ်ပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်ရသလောက်၊ လုပ်နိုင်သလောက် အကြိမ်ရေအထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ရှူသွင်းတဲ့ အချိန်၊ အောင့်ထားတဲ့ အချိန်နဲ့ ရှူထုတ်တဲ့ အချိန်၊ ရှူထုတ်ပြီး အောင့်ထားတဲ့ အချိန်တွေ ညီနေရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဆိုပါတော့ အသက်ရှူသွင်းတဲ့ အခါမှာ စိတ်ထဲကနေ ၁.၂.၃….. စသဖြင့်ရေတွက်ကြည့်ပါ..။ ၁၅ ရတယ် ဆိုပါစို့။ အသက်ရှူပြီး အောင့်ထားတဲ့ အချိန်ဟာလည်း ၁၅ အထိရဖို့၊ အသက်ပြန်ရှူထုတ် တဲ့အခါမှာလည်း ၁၅ အထိ ရဖို့ပါ။ ရှူထုတ်ပြီး အောင့်ထားရင် လည်း ၁၅ ရဖို့ပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ ၁၅ ၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀ ဆိုပြီး အရှိန်မြှင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အသက်ရှုနည်းကို လေးဘက်ညီ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရှူသွင်းခြင်းနဲ့ ရှူထုတ်ခြင်းကို သာ အများစုက သိမြင်ကြပါတယ်။ ရှူသွင်းပြီး အချိန်နဲ့ ရှူထုတ်ပြီး အချိန်ကို သတိမမူမိ၊ မသိကြပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင်တွေ အဆုတ်ထဲမှာ ပြည့်ဝများပြားနေရင် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မယ် မဟုတ်လား။ ရှူသွင်းချိန်၊ အောင့်ထားချိန်၊ ရှူထုတ်ချိန်၊ အောင့်ထားချိန် တွေ ညီနေရင် အကောင်းဆုံး အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။ အဲဒီလို ရှူတော့ ဘာတွေ ရမလဲ၊ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတော့ .. ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးကြောတွေ အားလုံး ပွင့်သွားပြီး သွေးလှည့်ပတ် စီးဆင်းနေတာကို တဖျင်းဖျင်း ခံစားရပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေရင်း အလွန်ပေါ့ပါး အလွန်လန်းဆန်းသွား လိမ့်မယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်။ အချိန်ရရင် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့၊ အချိန်ရရင် ရသလို လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့ လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းပါရစေ။
အလုပ်က ပြန်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အခါမှာ ဒုတိယ ဖော်ပြမယ့် အနေအထားကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုဖာ သို့မဟုတ် အောက်ခင်း ထူထူမပါတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်လိုက်ပါ။ ခေါင်းအုံးနဲ့ အခြား အခုအခံ ဘာမျှ မသုံးပါနဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကို စန့်နိုင်ဆန့်ပါ။ ဖြောင့်နိုင်သမျှ ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး၊ အထက်က ပြောခဲ့သလို လေးဘက်ညီ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာကို လေ့ကျင့်ပါ။ ညီညွှတ်မျှတခြင်းဟာ အနုပညာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ အသက်ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှူပြီး အားအင်ပြည့်လျှမ်း စိတ်ရွှင်လန်းဖို့ အသက်ရှူခြင်း အနုပညာကို လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ကြည့်ပါ။ အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမယ် ဆိုတာ အာမခံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်များပြားပြီး ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်ပေးပြီး မလုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ကြည့်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတယ် ဆိုရင်တော့ လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါဦး။ ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင်ထက် ကောင်းတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ဆိုတာ မရှိဘူး မဟုတ်လား။
အသုဘအခမ်းအနားမှာ မူဆလင်အစွန်းရောက်များအသေခံဗုံးခွဲ - ငါးဆယ် သေ - တစ်ရာခန့် ဒဏ်ရာရ -
9:08:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ဘက်ကဒက်။ စက်တင်ဘာ (၂၁)။ ၂၀၁၃
ဘက်ကဒက်မြို့ တော် အရှေ့ ပိုင်းတွင်၊ အသုဘ
သေဆုံးပြီး တစ်ရာခန့် ဒဏ်ရာရကြောင်းသိရ။
အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း ဂျူလိုင်လတွင် (၁၀၅၇) ဦးသေဆုံး
ခဲ့ပြီး၊ သြဂတ်စ်လတွင် (၉၁၆) ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပက်ရှရဝါဒေသရှိ ခရိယာန် ဝတ်ကျောင်းအား ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများမှ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် ...
၇၅-ဦး သေဆုံး ၁၀၀-ကျော် ဒဏ်ရာရ ...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ပက်ရှရဝါဒေသရှိ သူတော်စင်များ ခရိယာန် ဝတ်ကျောင်းတော်၌ တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုပွဲ အပြီး ဝတ်ကျောင်း မြက်ခင်းပြင်၌ ကျင်းပသော အလှူပွဲ၌ စုဝေးနေကြသော ခရိယာန်ဘာသာဝင်များအား အစ္စလာမ် သူရဲကောင်း ၂-ဦးက အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် လူပေါင်း ၇၅-ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀၀-ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဗုံး ပေါက်ကွဲချိန်၌ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀-ကျော် သက်တမ်းရှိ ထိုဝတ်ကျောင်းဝင်း အတွင်း ဝတ်ပြုရန်လာသူ ခရိယာန်ဘာသာဝင်ပေါင်း ၄၀၀-ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟု ဆို၏။
9:00:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
ငရဲအကြောင်းရေးရမည် ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အထူးပင်စိတ်ဝင်စားချေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ငရဲဆိုလျှင် လူဆယ်ဦး အတွေးဆယ်ခု အမြင်ဖြင့် သုံးသပ်နေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သုံးသပ်ခြင်းမှာ လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အမှားမဟုတ်။ ငရဲဟူသည်ကား မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူ နှင့် ပြန်လည်ဟောကြားသူ နည်းပါးနေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ငရဲဆိုတာဘာလဲ။ ဆီပူဒယ်အိုးထဲမှာ ထည့်မွေတာလား ဟု လူကြီးများကို မေးလေ့မေးထ ရှိခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂမ်များကို လေ့လာလိုက်စားပြီးနောက် ငရဲဆိုသည်မှာ ဤသို့ဤပုံရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။
စာဖတ်သူ ဓမ္မမိတ်ဆွေသည်လည်း ငရဲကိုယုံပါသလော။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ငရဲကို မည်သို့ သတ်မှတ်ပါလေသ လော။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ၃၁ ဘုံရှိသည်ကို သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ (အသေးစိတ်သိသူများလည်း ရှိလျှင်ရှိချေမည်) ထို ၃၁ ဘုံ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရသော် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ဗြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်၊ လူ့ဘုံ၊ နတ်ပြည် ခြောက်ထပ်၊ ဗြဟ္မာပြည် အထပ် ၂၀ ဟု စုစုပေါင်း ၃၁ ဘုံရှိချေသည်။ ဤသည်မှာ စာရေးသူ အပြောမဟုတ် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများဖြစ်ချေ သည်။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမဟုဆိုရာတွင် ထိုဘုံများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းလေသလားဟူ၍ လည်း အထင်မှားသူများလည်း ရှိကောင်းရှိချေလိမ့်မည်။ လားလားမှ မသက်ဆိုင်ပါ။ စင်္ကြဝဌာ ဖြစ်တည်သည်မှ စ၍ အနန္တလောကကြီး ကနဦးကတည်းက ၃၁ ဘုံရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ဤ ၃၁ ဘုံတွင် ကျင်လည်ခဲ့ရသေးသည်။
မြတ်စွာဘုရား ရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဘုရားမဖြစ်မှီ အရင့်အရင် ဘဝများက ငရဲဘုံတွင် ဝဋ်ကြွေးခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားလောင်း တေမိမင်းသား ဘဝသို့ရောက်သောအခါ ဆွံ့အသူ ပမာ စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ချေ။ မုသား၏ အကုသိုလ်ကံမည်မျှကြီးလေသည်ကို သိရှိပြီး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့သည်။ ယခင် ငရဲဘုံဘဝက အာခေါင်ခံတွင်းသို့ သံရည်ပူများလောင်းချ ခံရသည့် ငရဲဘုံတွင် ဝဋ်ကြွေးပေး ဆပ်ခဲ့ ရခြင်းကြောင့် ယင်း အလေ့အထုံကို အမှတ်သညာဖြစ်ကာ စကားမပြောပဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ငရဲကျခံရသည်ကို စာဖတ်သူတို့ ဘုရားလောင်းဇာတ်တော်အရ သိရှိပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငရဲဘုံမှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သည့် ဆိုသော်ငြားလည်း ဘုရားမပွင့်မှီ ပဝေသနီက တည်းက တည်ရှိနေသာ ဘုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြနိုင်ချေသည်။
ငရဲကြီး ရှစ်ထပ်ရှိချေသည်။ ၄င်းတို့မှာ- သဉ္ဇိုင်းငရဲ၊ ကာဠသုတ်ငရဲ၊ သံဃာသ ငရဲ၊ ရောရုဝ ငရဲ၊ မဟာရော ရုဝ ငရဲ၊ တာပန ငရဲ၊ မဟာတာပန ငရဲ၊ အဝီစိငရဲ ဟူ၍ ဖြစ်ပြီး ငရဲနှစ်မှာ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၄၀၀၀၊ ၈၀၀၀၊ ၁၆၀၀၀၊ အန္တရကပ် တစ်ဝက်၊ ၁ အန္တရကပ် ဟု နှစ်အသီးသီး ကြာမြင့်ကြသည်။ ငရဲတွင် တစ်ရက် သည် လူတို့နှစ် ကိုးသန်းနှင့် ညီမျှချေသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သက်တမ်းနှင့် ပြန်လည်မြောက်ကြည့်လျှင် အင်မတန် ရှည်လျားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ငရဲဘုံတို့၏ အကျဉ်းချုပ်ကိုသာဖော်ပြမည်။
သဉ္ဇိုင်းငရဲ မှာ အကုသိုလ်ကံမကုန်မချင်း သံတင်းပုတ်ဖြင့် ထုကာညင်းဆဲသတ်ဖြတ်သော ငရဲ
ကာဠသုတ်ငရဲ မှာ အကုသိုလ်ကံမကုန်မချင်း ခုတ်ရွေ ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်သော ငရဲ
သံဃာသ ငရဲ မှာ အမုန့်ညက်ညက်ကြေမွအောင် သံတောင်ကြီးဖြင့် ကြိတ်ချေသော ငရဲ
ရောရုဝ ငရဲ မှာ အလွန်ငံယား၊ စပ်ခါး၊ ခြစ်တူး ပူလောင်သော အခိုးအငွေ့တို့ဖြင့် နှိပ်စက်သော ငရဲ
မဟာရောရုဝငရဲ မှာ ထိုအခိုးအငွေ့အပြင် မီးတောက်မီးလျှံများဖြင့်ပါ တောက်လေင်စေသေ ငရဲ
တာပနငရဲ မှာ စအိုမှ ဦးခေါင်းထိ မီးကင် သံတံကျင်ဖြင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသောငရဲ
မဟာတာပန ငရဲ သံပူတောင်များ၊ သံဆူးပင်ကြီးများပေါ် ပြေးတက်စေပြီး လိုက်လံနှိပ်စက်သော ငရဲ
မဟာအဝီစိ ငရဲ ငရဲ သံသေတ္တာကြီးတွင် အလွန်ပူလောင်အရှိန်ပြင်းထန်သော မီးတောက်တို့ဖြင့် ကွက်လပ်မရှိ နှိပ်စက်သောငရဲ
ငရဲဘုံတစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ် လူ့ဘုံမှ စ ၍ ယူနာပေါင်း ၁၅၀၀၀ စီကွာခြားသည်။ ထို့ပြင် ငရဲကြီး တစ်ထပ် တစ်ထပ်တွင် အရပ်လေးမျက်နှာ၌ ငရဲငယ် ၅ခုစီ ဝန်းရံထားသေးသည်။ ၄င်းတို့ကို ဆက်ရှင်နေလျှင် စာရှည်နေလိမ့်မည်။
အဆိုးဆုံးငရဲမှာ အဝီဇီငရဲဖြစ်ပြီး သဉ္ဇိုင်းငရဲမှာ အခြား ငရဲတို့နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ခံရသည့် နှစ်နှင့် ဝေဒနာသေး ငယ်နေချေသေးသည်။ တစ်ထပ်နှင့် တစ်ထပ်အာနိသင်မတူ။ ဥပမာ- ဂရုကံ (အမိသတ်၊ အဖသတ်၊ သံဃာဂိုဏ်းခွဲ စသည်ဖြင့် ကံကြီးထိုက်ငါးပါး) က မဟာအဝီဇိသို့ ကြိမ်းသေရောက်ရသည်။
ငရဲ၏ ဆိုးပုံကို စာဖွဲ့လျှင် အင်မတန်ကိုများပြားလှပေသည်။ကြောက်မက်ဖွယ်လည်း ကောင်းပေသည်။
ထို့ကဲ့သို့လွန်ကဲမှုများကြောင့် ငရဲကို ယုံကြည်သူပင် နည်းလာခဲ့သည်။ အဲလောက်တောင် များတာလား မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟု သုံးသပ်သူများပင် ရှိလာစေသည်။
ငရဲသည် ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုသူများအတွက် လားရာဘုံဘဝတစ်ခု ဖြစ်ချေသည်။
ဤတွင် ထောက်စရာအချက်တစ်ခုရှိချေသည်။ လူသားအားလုံး အမှားနှင့်မကင်းချေ။ အားလုံး အမှား ကိုယ်စီရှိကြချေ သည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်း ငရဲရောက်သလောဟု မေးစရာရှိလာသည်။ မရောက်ပါ။ ၃၁ ဘုံတွင် ဘုံတစ်ခုခုသို့ရောက်ရချေသည်။ အကုသိုလ်ကို အများအားဖြင့် ပြုလုပ်တတ်သူသည် (အများ အားဖြင့်) ငရဲ ဘုံနှင့် အခြား ဒုက္ခတိဘုံဖြစ်သည့် တိရစ္ဆာန်၊ ဗြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်ဘုံဘဝသို့ရောက်ကြရ သည်။
မကောင်းမှုအများဖြင့်လုပ်သော်လည်း ကောင်းသောလူ့ဘုံ၊ နတ်ဘုံရသည်များလည်း ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် နည်း။ မှန်ပါသည်။ မိမိ မည်သည့် ဘုံဘဝသို့ရောက်မည်ဆိုခြင်းမှာ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ဖန်တီး သည်။ မည်သည့် တန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်တို့ကမှ သင်ထိုဘုံသုိ့သွားလော့ဟု ခိုင်းစေမရချေ။ ကိုယ်သွား မည်ဘုံ ကိုယ်တိုင်သာ ဖန်တီးသည်။
ငရဲတစ်ခုတည်းနှင့် မပြောလိုတော့ ဒုက္ခတိဘုံအားလုံးနှင့် ခြုံပြောမည်။ မိမိ ဒုက္ခတိဘုံသို့ရောက်နိုင် မရောက်နိုင် မှာ သေခါနီး (စုတိခါနီး) မိမိထားသော စိတ်အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အကုသိုလ်အလုပ်များသူသည် စုတိခါနီးတွင် အကုသိုလ်ကံများသာ ထင်လာပြီး ဧကန် ဒုက္ခတိ ဘုံများ သို့ရောက် ရသည်။ ဥပမာ-တိရစ္ဆာန်၊ အသူရကာယ်၊ ငရဲ စသည်ဖြင့်။
သို့သော် အကုသိုလ်အလုပ်များသော်ငြား လည်း သေခါနီး (စုတိခါနီး)တွင် ပြုဖူးသည့် ကုသိုလ်ကံ တစ်ခု ထင်ခြင်းကြောင့် လည်း သုခတိဘုံများသို့ ရောက်ရချေသည်။ ဥပမာ-လူ့ဘုံ၊နတ်ဘုံ စသည်ဖြင့်။ (ဤသို့ သေခါ နီးဖြစ်ပေါ်သော စိတ် (ဇောစိတ်)များကို စာဖတ်သူများမှ သိလိုလျှင် ဆောင်းပါးသက်သက်ရေး ပါမည်။)
ဘဝတစ်ပါးမှသေလွန်ပြီး အခြားဘဝတွင် ဖြစ်ရခြင်း ပဋိသန္ဓေမှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သည်။ ကြားတွင် နေသည်ဟုမရှိ။ ထို့ကြောင့် အသုဘ ရက်လည် နှင့် ပန်းခြောက်ယူပြန် တရားနာ ခြင်းတို့မှာ မှားယွင်းသော အယူအဆဖြစ်ချေသည်။ ထို့ပြင် ကူးတို့ခပေးခြင်းတို့လည်း မှားယွင်းချေသည်။
ယခု ငရဲ ရှင်းမပြီးသေးချေ။ စာဖတ်သူတို့တွင် ငရဲကို မယုံသူတို့ရှိနေချေအုံးမည်။ လူတို့သည် အကုသိုလ်နှင့် ကု သိုလ် မည်သည်တုိ့က အဖြစ်များသနည်း။ စာဖတ်သူတို့ ဝေးဝေးမကြည့်လေနှင့်။ မိမိကိုယ်ကိုယ်သာ သုံး သပ်ချေ။ အကုသိုလ်ပိုများနေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ငရဲများအင်မတန်ပင် များပြားလှသည်။ ဒုက္ခ များ အင်မတန် ထူပြောလှသည်ဟုပင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားခဲ့သော်လည်း ငရဲ မကြောက်။ အပါယ်မကြောက် အကုသိုလ် ဒုစရိုက်များ ပြုနေကြသည်။ ငရဲကိုသာ မဖော်ထုတ် မဟောကြား ပဲထား ထားလျှင် လောကကြီး မည်မျှပင် အကုသိုလ်များနှင့် ပြည့်နှပ်နေမည်နည်း။ စာဖတ်သူတို့ တွေးကြည့်လော့။
ယခုခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီး အောက် ယူဇနာပေါင်း ၁၅၀၀၀ မက ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ ချော်ရည် ပူများသာ ရှိသည်။ ထိုအချက်ကို ကြည့်ပြီး ငရဲမရှိချေဟု စာဖတ်သူတို့ ငြင်းပေအုံးမည်။ ငရဲဘုံ ဟူသည် ထိုဘုံ ဘဝတွင် ကျခံရမည့် သူများသာ သိနိုင်ရိုးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ရကား အကောင်အထည် ဒြပ်မပြနိုင်ချေ။ နတ်ဘုံများလည်း ထိုနည်းတူစွာပင်။
ထောက်ပြစရာအချက်ကျန်သေးသည်။ ယခုခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီး အောက် ယူဇနာပေါင်း ၁၅၀၀၀ မက ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ ချော်ရည်ပူများသာရှိသည်။ ထိုအချက်ကို ကြည့်ပြီး ငရဲမရှိချေဟု စာဖတ်သူတို့ ငြင်းပေအုံးမည်။ ငရဲဘုံဟူသည် ထိုဘုံဘဝတွင် ကျခံရမည့် သူများသာ သိနိုင်ရိုးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ရကား အကောင်အထည် ဒြပ်မပြနိုင်ချေ။ နတ်ဘုံများလည်း ထိုနည်းတူစွာပင်။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ပေ။
မြင်မှယုံမည် မြင်မှယုံမြင်ဆိုသောသူတို့ အကုသိုလ်ကုသိုလ် မည်သည်မှားသည်မှန်သည်ကို ဗုဒ္ဓအဆုံး အမ ကို လေ့လာထား၍ သိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြင်နိုင်ကြလော။ အာရုံ၏ အမှန် ကိုမြင်နိုင်ကြလော။ မှားမှန်း သိသော်လည်း ယင်းအမှားကို ကျူးလွန်နေကြသေးသည်။ ဒုစရိုက်မကောင်းဟု သိပေသော်ငြား လည်း အာရုံ၏ သဘောအမှန်ကို မမြင်နိုင်ကာ ဆက်လက်မှားနေကြသည်။ အနီးစပ်ဆုံး မိမိရုပ်၊ နာမ် တွင်ဖြစ် တည်သော အာရုံ၏ အမှန်ကိုပင် မမြင်နိုင်၊ ယူဇနာ ထောင်သောင်းမက ဝေးသော ငရဲကို မြင်နိုင် ရန် ဝေး လှချေသေး၏။ အာရုံ၏ သဘောအမှန်ကို မြင်လျှင် မည်သည်မှာ ငရဲ၊ မည်သည်မှ နတ်ဘုံ၊ ဗြဟ္မာဘုံဟု တပ်အပ်မြင်ချေ လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ချက် စာဖတ်သူတို့ သဘာဝလောကကိုလေ့လာချေ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မရေမတွက်နိုင်သော တိရစ္ဆာန်၊ အင်းစက်ပိုးမွားများ မည်မျှ ရှိချေသနည်း။ သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏လေ့လာချက်အရ လူသား အရေ အတွက် မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးပေါင်းမှ သန်း ၇ထောင် ကျော်ရုံမျှသာ ရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့် မမြင်နိုင်သော အခြား သက်ရှိတို့ မည်သည့် ဘုံဘဝတွင် ဖြစ်တည်နေသည်ကို စဉ်းစားတွေးကြည့်လေ။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သည်တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာ သမုဒ္ဒရာမှ အပ်တစ်စင်းနှင့် ကောင်းကင်မှ အပ် တစ်စင်း ထိပ်ခြင်းထိရန်ခဲယင်းသည်။ ယင်းခဲယင်းမှုထက် လူတစ်ဦး ဖြစ်လာရန်မှာ အင်မတန်ခဲယင်းသည့် ကိစ္စရပ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းကို မသိရှိသူတို့က လူတို့၏ တန်ဖိုးကိုနားမလည်ပဲ မိုက်မဲနေကြသေးသည်။ လူပြန်ဖြစ် ရန် အင်မတန်ခဲယဉ်းချေသည်။ အခြား ငရဲဘုံတို့တွင် ပဋိသန္ဓေရန် အင်မတန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော ဘဝတွင် ကောင်းမှုများကိုသာပြုလုပ်ပြီး တရားပွားများကြင့်ကျံကာ သံသရာလော ကမှ လွတ်မြောက်စေရန် လမ်းညွန်ဟောကြားခဲ့ချေသည်။
စာဖတ်သူတို့ ငရဲ စသည် ဆင်းရဲခြင်း ဘုံဘဝတို့ကို အမှန်မြင် သိရှိကာ သံသရာမှ လွတ်မြောက်အောင် လေ့လာကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
ကိုးကား - အဘိဓမ္မာ
နဝဒေးတံတားအောက် လူသတ်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အေ...